ရုပ်ရှင်မှ 22 စာပိုဒ်တိုများ: သင်၏အမည် (Kimi no na wa) | ကိုယ်ပိုင်အကူအညီအရင်းအမြစ်များ
“ Kimi no No wa” ရုပ်ရှင်ကိုလူတိုင်းမသိကြဘူး၊ ထို့အပြင် "သင်၏နာမကို" အဖြစ်လူသိများ။ ၂၀၁၆ ရုပ်ရှင်ကိုရင်ခုန်စရာကောင်းသည့်ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ဖန်တီး၍ ဂျပန်ကာတွန်းနှင့်ဒါရိုက်တာ Makoto Shinkai ကရိုက်ကူးထားသောရုပ်ရှင်ဖြစ်သည်။
အဆိုပါရုပ်ရှင်သည်တိုကျိုတွင်နေထိုင်သောလူငယ် Taki အကြောင်းနှင့်ငယ်ရွယ်သော Mitsuha သည်တောင်ပေါ်ရှိရွာတစ်ရွာတွင်နေထိုင်သည်။ သူတို့အိပ်သွားတဲ့အခါမှာဇာတ်ကောင်နှစ် ဦး စလုံးရဲ့အလောင်းတွေကိုလဲလှယ်ပြီးသူတို့ဟာနိုင်ငံခြားခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိနေတယ်လို့ခံစားကြရတယ်။ ဤရုပ်ရှင်သည်ဂျပန် Box Office တွင်အောင်မြင်ခဲ့ပြီးကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးတွင်လည်းအောင်မြင်ခဲ့သည်။
သူသည်ဂျပန်၌ ၁၂ ရက်ဆက်တိုက်သီတင်းပတ်ကုန်ရက်ဖြစ်ပြီး ၂၀၁၇ ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလတွင် Spirited Away သည်အအောင်မြင်ဆုံးကာတွန်းကားအဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်းခံရသည်။ ၎င်းသည်ဝင်ငွေဒေါ်လာ ၂၈၁ သန်းထက် နည်း၍ ရုပ်ရှင်၏တေးဂီတကိုပင်လူအများလက်ခံခဲ့ကြသည်။ ပထမ ဦး ဆုံးရုပ်ရှင်သည်ရှုပ်ထွေးပုံရသော်လည်းပရိသတ်ကိုစိတ်ဝင်စားစေရန်ရည်ရွယ်သည်။ ဤဆောင်းပါး၏အကြောင်းပြချက်သည်ရုပ်ရှင်အကြောင်းပြောဆိုရန်မဟုတ်ဘဲ ၄ င်း၏စာပိုဒ်တိုများကြောင့်သင်မည်သို့ကြည့်ရှုသည်ကိုဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်။ သင်က၎င်း၏ကြံစည်မှု၏ဆက်စပ်မှုကို၎င်းမှယူထားသောစာပိုဒ်တိုများနှင့်ချိတ်ဆက်နိုင်ပြီးဖြစ်နိုင်သည်မှာဤရုပ်ရှင်သည်မည်သည့်နေရာတွင်မဆိုအောင်မြင်မှုရရှိခဲ့သည်။
ဤစာပိုဒ်တိုများကသင့်အားဘဝ၏အချို့သောကဏ္aspectsများကိုနားလည်ရန်သို့မဟုတ်သင့်ကိုယ်သင်ပိုမိုသိကျွမ်းရန်အထောက်အကူပြုသည်ထက်ပိုများသည်။ သင်၏စကားလုံးများကိုသင်မည်သို့ခံစားရသည်သို့မဟုတ်မည်သို့မည်ပုံသတ်မှတ်သည်ဖြစ်စေ၊ ၎င်းတို့သည်သင့်ကိုအစေခံသည်ဖြစ်စေ၊ မရှိသည်ဖြစ်စေမူတည်သည်။ သို့သော်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောရလျှင်ဤစကားစုများသည်သင်ဤရုပ်ရှင်ကိုဖြစ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံးကြည့်ရှုစေလိုသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ကြိုးတွေကအချိန်ကိုယ်နှိုက်ကိုကိုယ်စားပြုတယ်။ ကြိုးများသည်လှည့်၊ အဲဒီအချိန်က Taki tachibana
ငါနိုးသောအခါကျန်ရှိနေသည့်တစ်ခုတည်းသောအရာမှာအချိန်ကြာမြင့်စွာဆုံးရှုံးရမည့်ဆုံးရှုံးမှုခံစားချက်ဖြစ်သည်။ Mitsuha Miyamizu
အလောင်းတွေပြောင်းလဲတာကိုရပ်လိုက်တယ်။ ကျွန်တော့်ရဲ့စာတွေ၊ ဒါနဲ့ Mitsuha ကိုကိုယ်တိုင်သွားတွေ့ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ Taki tachibana
ငါဘာလုပ်သင့်လဲ? သူကငါနှင့်အတူအနှောက်အယှက်ပေးသလော သူ့အတွက်ထူးဆန်းလိမ့်မည်လော။ ဒါမှမဟုတ်အနည်းဆုံးတော့ငါ့ကိုတွေ့ရတာဝမ်းသာမှာလား။ Mitsuha Miyamizu
ကြယ်တံခွန်ပြိုကွဲသွားနိုင်ပြီး ၅၀၀ ကျော်သေလိမ့်မယ်။ သင်ဤမျှအနတ္တကိုမည်သို့ပြောဝံ့သနည်း။ သင်အမှန်တကယ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုဆိုလိုသည်ဆိုလျှင်သင်ဖျားနာရမည်။ သင့်ကိုဆေးစစ်ဖို့တစ်ယောက်ယောက်ကိုသင့်ကိုခေါ်သွားမှာပါ။ ထိုကာလတိုင်အောင်နားထောင်ပါမည်။ -Toshiki (Mitsuha ရဲ့အဖေ)
လွန်ခဲ့တဲ့သုံးနှစ်က၊ မင်းကိုမတွေ့ခင် လွန်ခဲ့တဲ့သုံးနှစ်ကမင်းငါ့ကိုလာကြည့်ခဲ့တယ်။ - တိုကီသည် Mitsuha ဖြစ်သည်။
အတွေ့အကြုံကိုတန်ဖိုးထားလေးမြတ်ပါ၊ အိပ်ရာမှထလျှင်အိပ်မက်များပျောက်ကွယ်သွားမည်။ ဟီတို
ဤအမှုအလုံးစုံတို့ကိုမီ, ငါ့အသက်ကိုအလွတ်စာမျက်နှာဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါ့ကိုငိုခဲ့တဲ့အဟောင်းငါ့ကိုအခုတွေ့ဖို့အရမ်းပျော်လိမ့်မယ် Taki tachibana
ဘယ်တော့မှမတွေ့ဖူးသူနှစ် ဦး ၏အစည်းအဝေး။ ကြမ္မာများ၏ဂီယာလှုပ်ရှားလာကြသည်။ Taki tachibana
တစ်နေ့မှာအရာရာကိုမေ့သွားမှာကိုငါကြောက်တယ်။ အခုငါအတွက်အရေးကြီးတဲ့အရာတွေအများကြီးရှိနေပြီ။ Taki tachibana
ဤအမှုအလုံးစုံတို့ကိုမပြုမီ, ငါ့အသက်ကိုအလွတ်စာမျက်နှာဖြစ်ခဲ့သည်။ ငိုကြွေးနေသောငါ့ကိုအိုမင်းသူအခုငါ့ကိုတွေ့ဖို့ဝမ်းသာလိမ့်မည် Taki tachibana
မင်းပျော်နေရင်ငိုတာ၊ ဝမ်းနည်းတဲ့အခါရယ်တာ၊ မင်းရဲ့နှလုံးကမင်းထက်သာနေတာကြောင့် Nandemonaiya
ငါအမြဲတမ်းတစ်ခုခု၊ လူတစ်ယောက်၊ နေရာတစ်ခုကိုရှာနေသည်။ ကျွန်ုပ်သည်မည်သည့်နေရာ၊ မည်သည့်နေရာတွင်ရှိသည်ကိုကျွန်ုပ်မမှတ်မိပါ။ သို့သော်ကျွန်ုပ်အတွက်အရေးကြီးကြောင်းသိပါသည်။ Taki Tachibana
ကြယ်များကျသောနေ့ ဒါဟာအိပ်မက်ထဲကမြင်ကွင်းတစ်ခုလိုလိုပဲ။ Taki tachibana
ငါတို့သည်သင်တို့ကိုကတိပေးမည်။ ငါတို့သည်ဤလောက၌အဘယ်နေရာ၌နေသည်ဖြစ်စေ၊ တဖန်ငါတို့ကိုတွေ့ ဦး မည်ဟုသင်တို့ကိုငါကတိပေးခဲ့သည်။ Mitsuha Miyamizu
မင်းနာမည်ကဘာလဲ? Mitsuha နှင့် Taki
ဒီခံစားချက်ကအဲဒီနေ့ကတည်းကငါ့ကိုဆုပ်ကိုင်ထားတယ်။ Mitsuha Miyamizu ။
အဲ့ဒါနဲ့လွန်ခဲ့တဲ့သုံးနှစ်က Mitsuha နဲ့အတူအလောင်းတွေပြောင်းခဲ့တာလား။ အဆိုပါအချိန်ဇယားအမိန့်မခံခဲ့ရပါ။ Taki tachibana
Miyamizu ၏အိပ်မက်များသည်ယနေ့အတွက်သာဖြစ်သည်။ အဘွားငါ့ကိုနားထောင် ကြယ်တံခွန် Itomori ကိုတိုက်ခတ်။ လူတိုင်းသေရမည်။ - တိုကီသည် Mitsuha ဖြစ်သည်
ဒီခံစားချက်ကကျွန်တော့်ကိုလောင်စေတယ် Mitsuha Miyamizu
သင်မြင်သည့်အတိုင်းဤစကားစုများသည် Transcendental စာပိုဒ်များမဟုတ်ပါသို့မဟုတ်၎င်းသည်ဘဝအပေါ်သင်၏ရှုထောင့်ကိုပြောင်းလဲစေသည်။ ၎င်းတို့သည်ကမ္ဘာအနှံ့အပြားကြိုက်နှစ်သက်ခဲ့သည့်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ညွှန်းမှစကားစုများဖြစ်သည်။ ရုပ်ရှင်တစ်ခုလုံးကိုခင်ဗျားတို့အားလုံးကြည့်မယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားအတွင်းမှာတစ်ခုခုပြောင်းလဲသွားပြီလို့ခံစားရနိုင်တယ်။
ရုပ်ရှင်၏အစတွင်သင်အနည်းငယ်ရှုပ်ထွေးနိုင်သည်ဟုခံစားရပေမည်၊ သို့သော်ပုံမှန်အတိုင်းဖြစ်သည်။ ဤရုပ်ရှင်ကိုစတင်ကြည့်ရှုသောအခါရှုပ်ထွေးမှုများသည်များသောအားဖြင့်ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိသည်၊ ရုပ်ရှင်ကြည့်ပြီးတာနဲ့သင်ဟာဒီဇာတ်လမ်းကိုစိတ်ရှုပ်ထွေးသွားမှာဖြစ်ပြီးဒါကဒီသရုပ်ဆောင်ရုပ်ရှင်ရဲ့မှော်အတတ်ပါပဲ။ ရုပ်ရှင်ကြည့်နေစဉ်သင့်စိတ်ထဲတွင်ရှိနေမည့်မေးခွန်းများကိုဖြေကြားပေးမည်ဖြစ်သောကြောင့်အဖြေများအားလုံးသည်သင့်အတွင်း၌ဖြစ်သည်။ ရုပ်ရှင်ကြည့်ပြီးတဲ့နောက်ခင်ဗျားရဲ့အတွင်းပိုင်းနဲ့ဗဟုသုတတွေကမင်းတို့မြင်ခဲ့တဲ့အရာတွေကိုအဖြေပေးလိမ့်မယ်။
ဒီညဟာဘယ်ရုပ်ရှင်ကိုဒီညမှာကြည့်မလဲ၊ သင် anime ကိုကြည့်ချင်တယ်၊ သင်ကြိုက်နှစ်သက်မည့်အကြောင်းကိုလည်းကြိုတင်သိထားလျှင်၊ မည်သည့်ရုပ်ရှင်ကြည့်ရမည်ကိုသင်သိပြီးဖြစ်သည်။ ဂျပန်ဇာတ်ကားနှင့်ဇာတ်ကားရိုက်ကူးသူအားလုံးသည်နှစ်ပေါင်းများစွာကုန်ဆုံးမည့်သက်တမ်းကုန်ဆုံးမည့်ရုပ်ရှင်ကိုဖန်တီးရန်အစွမ်းကုန်အားစိုက်ထားသည့်အခြားနေရာများမှကွဲပြားသောရုပ်ရှင်ကိုသင်ခံစားနိုင်ပါလိမ့်မည်။ ဒီရုပ်ရှင်ဟာငယ်ရွယ်ပေမယ့် ၂၀၁၆ ခုနှစ်မှာမွေးဖွားခဲ့တာဖြစ်ပေမယ့်နှစ် ၅၀ အကြာမှာတော့တောင်မှသေချာတယ်၊ ၎င်းသည်အားလုံးကချစ်မြတ်နိုးသောရုပ်ရှင်တစ်ကားအဖြစ်ဆက်လက်တည်ရှိလိမ့်မည်။
၅၅ မှစာပိုဒ်တိုများမှကြယ်ကောင် "
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ကိုယ်ပိုင်အကူအညီအရင်းအမြစ်များ » နည်းလမ်း » စာပိုဒ်တိုများ » ရုပ်ရှင်မှစာပိုဒ် ၂၂ ခု - သင်၏အမည် (Kimi no na wa)